နေးရာ၏ သက်သေခံထွက်ဆိုချက် - ဝီကီပီးဒီးယား
Nayirah Al-Sabah သက်သေခံထွက်ဆိုနေစဉ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာကူဝိတ်သံအမတ်ကြီး Saud Al-Sabah ၏ သမီးဖြစ်ကြောင်း နှင့် သူမ၏ ထွက်ဆိုချက်ကို အတည်ပြု၍မရကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် ထွက်ပေါ်လာသည်။
နေးရာ၏ ထွက်ဆိုချက်သည် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ရှိ နေးရာဟူသည့် အမည်တစ်ခုတည်းကိုသာသိရသော မိန်းကလေး တစ်ဦးက ၁၉၉၀ အောက်တိုဘာ ၁၀ တွင် ကွန်ဂရက်ရှင်နယ် လူ့အခွင့်အရေးကွန်ဖရင့် ရှေ့မှောက်၌ လိမ်လည်သက်သေခံချက် ဖြစ်သည်။ ယင်းသက်သေခံထွက်ဆိုချက်မှာ အများပြည်သူထံ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောက်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အထက်လွှတ်တော်အမတ်များ နှင့် သမ္မတ ဂျော့ဂျ် အိတ်ချ် ဒဘယ်လ်ယူ ဘုရှ်တို့က ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်း ၎င်းတို့၏ ကူဝိတ်ဘက်မှ ရပ်တည်ပေးမှုအား အကြောင်းပြရာတွင် အဖန်တလဲလဲ ကိုးကားအသုံးပြုခဲ့သည်။ နေးရာ၏ မျိုးရိုးအမည်မှာ အာလ်-ဆဘာရ် (အင်္ဂလိပ်: al-Ṣabaḥ; အာရပ်: نيرة الصباح) ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာကူဝိတ်သံအမတ်ကြီး Saud Al-Sabah ၏ သမီးဖြစ်ကြောင်း ၁၉၉၂ တွင် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့ပြင် အမေရိကန်လူထုဆက်ဆံရေးအကျိုးတော်ဆောင် Hill & Knowlton က ကူဝိတ်အစိုးရအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် လွတ်လပ်သောကူဝိတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားများ လူထုဆက်ဆံရေး ကမ်ပိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတခုအနေဖြင့် သူမ၏ သက်သေခံထွက်ဆိုချက်အား စီစဉ်ထားခြင်းလည်း ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဤသို့ဖြင့် al-Sabah ၏ ထွက်ဆိုချက်သည် ခေတ်သစ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုပုံဖော်ဝါဒဖြန့်ခြင်း (atrocity propaganda) ၏ နမူနာပြစရာတခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကူဝိတ်အား အီရတ်တို့ ကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် အီရတ်စစ်သားများက ကူဝိတ်ဆေးရုံရှိ လမစေ့ကလေးများအတွက်ဖန်ပေါင်းချောင်အတွင်းမှ လသားကလေးများအား ဖယ်ထုတ်ပြီး ဖန်ပေါင်းချောင်များအား ယူငင်ကြကာ ကလေးများအား သေစေရန်ပစ်ထားခဲ့သည်ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်ဟု သူမ၏ စိတ်ခံစားချက်အပြည့်ဖြင့်ထွက်ဆိုချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အစောပိုင်း၌ ဗြိတိသျှ အဲန်ဂျီအို တခုဖြစ်သည့် နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ က သူမ၏ ဇာတ်လမ်းအား အတည်ပြုပေးပြီး သတ်ဖြတ်မှုများ၊ လွတ်မြောက်လာသူများထံမှ ထွက်ဆိုချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် လွတ်လပ်သောအစီရင်ခံစာ အများအပြားအား ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကူဝိတ်လွတ်လပ်သွားပြီးနောက်တွင် သတင်းထောက် အများအပြားအား ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ "ကူဝိတ်သူနာပြုများနှင့် ဆရာဝန်များ…ထွက်ပြေးကြသည့်အခါ လမစေ့ကလေးများအပါအဝင် လူနာများ အမှန်တကယ်သေဆုံးခဲ့သည်" သို့သော် အီရတ်တပ်ဖွဲ့များက "ဆေးရုံသုံးဖန်ပေါင်းချောင်များအား ခိုးဝှက်ယူငင်ပြီး ကူဝိတ်လသားကလေးငယ် ရာပေါင်းများစွာကို သေစေရန်ပစ်ထားခဲ့သည် ဆိုခြင်းမှာမဟုတ်မှန်" ကြောင်း အေဘီစီသတင်းတရပ်က ဖော်ပြခဲ့သည်။ "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအား အမြတ်ထုတ်သည့်အနေဖြင့် လိုသလိုအသုံးချမှု"ဟု ဘုရှ်အစိုးရအဖွဲ့အား အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဂျွန်ဟီးလီက စွပ်စွဲခြင်းနှင့် အတူ အမှားပြင်ဆင်ချက်ထုတ်ပြန်ပြီး နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
၁.၁ လမစေ့ကလေးများအတွက်ဖန်ပေါင်းချောင်ဆိုင်ရာ စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများ
၁.၂ လွတ်လပ်သောကူဝိတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားများ
၁.၃ ဟေးလ် အဲန် နိုးလ်တန်
၁.၄ ကွန်ဂရက်ရှင်နယ် လူ့အခွင့်အရေး ဖောင်ဒေးရှင်း
၂.၁ ဟေးလ် အဲန် နိုလ်တန်
၆.၁ Hill and Knowlton
၆.၃ သံအမတ်ကြီး ဆဘာရ်
၆.၄ Lauri Fitz- Pegado
၇.၃ Kroll အစီရင်ခံစာ
၁၀ ပညာရှင်များ၏ မှတ်ချက်
အီရတ်သားတွေဟာ လူတွေကို ရိုက်မောင်းပုတ်မောင်းလုပ် ၊ ဗုံးကြဲ ပစ်ခတ်တာတွေ လုပ်နေကြပါတယ်။ လသားကလေးငယ်တွေကို ဖန်ပေါင်းချောင်တွေထဲက ထုတ်ပစ်ပြီး ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းအားလုံးကို ယူငင်သွားကြပါတယ်။ အသက်ဆက်ပေးတဲ့စနစ်တွေကိုလည်း ပိတ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မီးပွိုင့်တွေကိုတောင် ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အီရတ်သားတွေက ကူဝိတ်တွေကို ရိုက်နှက် နှိပ်စက် ၊ ဓားနဲ့ထိုး ၊ ကန်ကျောက်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်တာတွေ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ကူဝိတ် စစ်တပ်/ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်နေတာ တွေ့ရင် နားရွက်တွေကို ဖြတ်ပစ်ကြတယ်။
— St. Louis Post-Dispatch တွင် အစီရင်ခံထားသော ဘေးလွတ်ရာသို့ ကယ်ဆယ်ခံရသူ၏ ဖော်ပြချက်။ 
ကူဝိတ်အား အီရတ် ကျူးကျော်မှုနောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် လုယက်မှုများအား သတင်းပေးပို့ခဲ့သည်။ ကူဝိတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ် မဟာမက် အေ အဘူလ်ဟာဆန်က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟာဗီယာ ပီရက်ဇ် ဒီ ဆွယ်လာ ထံ ၁၉၉၀ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်နေ့၌ ပေးပို့သော စာတစောင်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားခဲ့သည်။
ကူဝိတ်နိုင်ငံကို ကျူးကျော်သူအီရတ်အာဏာပိုင်များက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေမျိုးစုံအား ချိုးဖောက် ကျူးလွန်သည့် လုပ်ရပ်များအား သင့်ထံ အကြောင်းကြားရန် ရည်ရွယ်၍ဆက်သွယ်မှုများအပြင် ကူဝိတ်အစိုးရမှ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့လာသော အတည်ပြုပြီး သတင်းအချက်အလက်များပေါ်အခြေခံလျက် သမိုင်းမှာ ယခင်က မဖြစ်ဖူးသေးသည့် "ကူဝိတ်အား လုယက်ဖျက်ဆီးရန် ကျူးကျော်သူအီရတ်အာဏာပိုင်များ၏ ပူးပေါင်းစစ်ဆင်မှု" အမည်ရသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအပေါ် အာရုံစိုက်စေချင်ပါသည်။ ဤစစ်ဆင်မှုအား အခြားအလားတူမည်သည့်အခင်းကိစ္စများနှင့်မျှ နှိုင်းယှဉ်ရန် မဖြစ်နိုင်ဘဲ နိုင်ငံတော် ၊ အများပြည်သူ နှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းပိုင် ပစ္စည်းဥစ္စာများ အပြင် အိမ်များ၊ စက်ရုံများ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ ဆေးရုံများ၊ ပညာရေးအဖွဲ့များ၊ ကျောင်းများ နှင့် တက္ကသိုလ်များပိုင်ပစ္စည်းများ အပါအဝင် ကူဝိတ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအား လုံးဝဖယ်ရှားပစ်ခြင်းထက်မလျော့သော စစ်ဆင်ရေးဖြစ်သည့်အတွက် ဖြစ်စဉ်အတိအကျကို သတင်းပေးရန် မစွမ်းနိုင်ပေ။ ကူဝိတ်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုမှာ စစ်တပ်၊ လုံခြုံရေး နှင့် နည်းပညာ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအား အသုံးပြု၍ လက်နက်ကိုင်လုယက်မှုတစ်ခုအား နိုင်ငံတစ်ခုက ကျူးလွန်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
"ဓာတ်မှန်စက်များ ၊ ရောဂါဖတ်စက်များ (scanner) နှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးကိရိယာများအပါအဝင် ပုဂ္ဂလိက နှင့် အများပြည်သူပိုင် ဆေးရုံများမှ ပစ္စည်းပစ္စယအားလုံးကို ခိုးဝှက်မှု" ဟုလည်း အဘူလ်ဟာဆန်က မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ လုယက်မှု စွပ်စွဲချက်များကို ဘေးလွတ်ရာသို့ကယ်ဆယ်ခံရသူများက ထပ်ပြောခဲ့ပြီး "ရုံးအဆောက်အဦများ ၊ ကျောင်းများနှင့် ဆေးရုံများ၌ လေအေးပေးစက်များ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ ကျောက်သင်ပုန်းများ၊ စားပွဲခုံများသာမက မွေးကင်းစကလေးများအတွက် ဖန်ပေါင်းချောင်များ နှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးပစ္စည်းများပါမချန် စစ်သားများက လုယက်ယူငင်ကြသည်" ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ "သူတို့ လုယက်ဖျက်ဆီးပုံအရ အဲဒီမှာ ကြာကြာနေဖို့ မျှော်လင့်ထားခဲ့ပုံမရဘူး" ဟု ပြည်ပရေးရာ ဗြိတိသျှအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်ဂလပ်စ် ဟာ့ဒ်က ခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။
လမစေ့ကလေးများ စွန့်ပစ်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် သေလုမျောပါးဖြစ်စေခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များကြောင့် ဖန်ပေါင်းချောင်များအား လုယက်ယူငင်မှုကို မီဒီယာများက စိတ်ဝင်စားကြသည်။ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့၌ ပြည်ပြေးကူဝိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး အဘူလ် ဝါဟဘ် အလ်-ဖိုဇန်က ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံ တာအိဖ်ရှိ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် "ကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကူဝိတ်ဆေးရုံများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာနများအားလုံးကို အီရတ်စစ်သားများက သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်း" နှင့် "လူနာများအား နှင်ထုတ်ပြီး အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးပစ္စည်းများ၊ လူနာတင်ကားများ၊ ဆေးဝါးများ နှင့် သွေးရည်ကြည်များကို ဆေးရုံများမှ လုယက်ခဲ့ခြင်း" ကြောင့် လမစေ့ကလေးငယ် ၂၂ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ဝါရှင်တန်ပို့စ် က ကူဝိတ်လသားကလေးငယ်များ၏ ဇာတ်ကြောင်း အစပြုရာကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့သည် -
လန်ဒန်မြို့၌ စာလက်ခံယူခဲ့သူ ဗိသုကာပညာရှင် ဟူဒါဘဟာ၏ အဆိုအရ ပြီးခဲ့သည့်လက ဥရောပသံတမန်တစ်ဦးက ဖွက်ယူလာသော အကြီးတန်း ကူဝိတ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရာရှိတစ်ဦး၏ စာတစ်စောင်မှ ဤဇာတ်လမ်း အစပြုခဲ့သည်။ ထွက်ပြေးနေကြသူ ကူဝိတ်များ နှင့် လန်ဒန်နေ ကူဝိတ်ကလေးအထူးကုဆရာဝန် Fawzia Sayegh ထံမှ စုစည်းထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များက အားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။
အီရတ်စစ်သားများက ဆေးရုံအများအပြားမှ လူနာများအား နှင်ချပြီး ကင်ဆာကုသခံလူနာများ၊ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရသည့်လူနာများနှင့် ဆီးချိုဝေဒနာခံစားနေရသော လူနာများအတွက် ကုသမှုပေးနေသာ အချက်အချာကျသည့်ဌာနများအား ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်ဟုလည်း ယင်းစာက အခိုင်အမာဆိုထားသည်။ ကျောက်ကပ်ဆေးစက်ကဲ့သို့ အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများအား ဘဂ္ဂဒက်သို့ ဆွဲယူသွားခဲ့ကြသည်ဟု Bahar နှင့် Sayegh က ပြောခဲ့သည်။ သယ်သွားသည့် ပစ္စည်းများတွင် ငွေ၊ ရွှေ၊ ကားများ နှင့် လက်ဝတ်ရတနာများ ပါဝင်ကာ အာရပ်ဘဏ်လုပ်ငန်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ အထက် တန်ဖိုးရှိသည်။ ယူဆောင်သွားသော စက်ပစ္စည်းများတွင် မွေးကင်းစကလေးများအတွက်ဖန်ပေါင်းချောင် ၂၂ ခု ပါဝင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
ယင်းနေရာသို့ အီရတ်အာဏာပိုင်များက သွားခွင့်မပေးသည့်အပြင် သံတမန်များအား သီးသန့်ခွဲထားသည့်အတွက် စွပ်စွဲချက်များအား အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ဝါရှင်တန်ပို့စ်က မှတ်ချက်ပြုသည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးထံ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်၌ ထပ်မံပေးပို့သည့် စာ တွင် အဘူလ်ဟာဆန်က Fowzan ၏ စွပ်စွဲချက်ကို ဆင့်ပွား ရေးသားခဲ့သည်
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုဟု ဖော်ပြနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့်ရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးကျော်သူအီရတ်အာဏာပိုင်များက ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း … ၂။ ကြီးထွားမှုနှေးကွေးသည့် (လမစေ့ကလေးများ) ကလေးများအတွက် အသုံးပြုရန် အမျိုးသမီးဆေးရုံများတွင် ထားရှိသော ဖန်ပေါင်းချောင်များအား ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြသောကြောင့် ကုသမှုခံယူနေသည့် ကလေးများအားလုံး သေဆုံးခဲ့ကြောင်းကို ကူဝိတ်ကျန်းမာရေးဌာနတွင်း စင်းလုံးချောသတင်းရင်းမြစ်များထံမှ အကြောင်းကြားမှုရရှိသည်။
ကလေးမည်မျှသေဆုံးသည်ကို ယင်းစာက မဖော်ပြထားပေ။ စာပါ စွပ်စွဲချက်များကို နောက်ရက်များတွင် မီဒီယာ၌ အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဲန်ပီအာ သတင်းဌာန၏ All Things Considered အစီအစဉ်တွင် လွတ်မြောက်လာသော ဓားစာခံတစ်ဦးနှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခု၌ အီရတ်တပ်ဖွဲ့များက "ကလေးများအား သေနတ်ဒင်များဖြင့် ဆောင့်ခဲ့ကြောင်း၊ မွေးကင်းစများအား ဖန်ပေါင်းချောင်မှ ဖယ်ရှားပြီး ဖန်ပေါင်းချောင်များကို ယူသွားခဲ့ကြောင်း" ဓားစာခံက ပြောကြားသည်။ "ဖန်ပေါင်းချောင်များအား ခိုးရန် လသားကလေးများအား အီရတ်တပ်ဖွဲ့များက ဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်း" ကို ၎င်းတို့ထံ ပြောကြ ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းဌာနက သတင်းပို့ခဲ့သည်။
"လမစေ့မွေးကင်းစကလေးများ အဆောင်၌ တပ်ဖွဲ့များက အီရတ်သို့ သင်္ဘောဖြင့် ထုပ်ပိုးတင်ပို့ရန် ဖန်ပေါင်းချောင်များပါ အောက်ဆီဂျင်ပေးစက်များအား ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်" ဟု စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် အဲန်ပီအာက သတင်းပို့သည်။
ဖန်ပေါင်းချောင်များအား အီရတ်တပ်ဖွဲ့များက ခိုးယူကြသည့်အတွက် လသားကလေး ၂၂ ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု ကူဝိတ်ကျန်းမာရေးအရာရှိများက သူ့ထံ ပြောခဲ့ကြောင်း ကူဝိတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ် အက်ဒွပ် နဲမ် ဂျူနီယာက စက်တင်ဘာ ၁၇ တွင် သတင်းထောက်များအား သတင်းပေးခဲ့သည်။ "လမစေ့ကလေးများထားရှိသည့် ဖန်ပေါင်းချောင်များအား အီရတ်တပ်ဖွဲ့များက သိမ်းယူကြပြီးလျှင် အတွင်းမှ လသားကလေးများအား သေစေရန် ကြမ်းပြင်ပေါ် စုပုံထားပစ်ခဲ့ကြသည်" ဟု ပြည်ပြေးဒုက္ခသည်များက သတင်းပေးကြောင်း လော့စ်အန်ဂျလိစ်တိုင်းမ်စ်က သတင်းတင်ဆက်သည်။ ဆန်ဟိုဇေး မာကျူရီ နျူးစ်ကလည်း ထိုနေ့တွင်ပင် အလားတူစွပ်စွဲချက်ကို သတင်းပေးပို့ပြီး "တချို့အတွက်တော့ ဒါဟာ လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု အဖြစ် ခေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဒီလိုသာ ယူဆမယ်ဆိုရင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကြားဝင်အရေးယူမှု တခုခုအတွက် အကြောင်းရင်း ဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း" အနောက်တိုင်းသံတမန်များက ယူဆသည်ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
"ကူဝိတ်မြို့ ဆေးရုံများမှ ဖန်ပေါင်းချောင်တွေကို ယူငင်သွားကြပြီဖြစ်ကြောင်း" ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာ က စက်တင်ဘာ ၂၅ တွင် သတင်းရေးသားသည်။ "မွေးကင်းစကလေးတွေ အကာအကွယ်မဲ့ပြီး သေသွားအောင် ကူဝိတ်ရှိ အမျိုးသမီးဆေးရုံသုံး လမစေ့မွေးဖွားကလေးများအတွက်ဖန်ပေါင်းချောင်တွေကို စက်ပိတ်ပစ်ဖို့ အီရတ်ခေါင်းဆောင်များက အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့ မကြာမီက သိရှိခဲ့ရတယ်" ဟု "လွတ်လပ်သောကူဝိတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားများ" ဥက္ကဋ္ဌ က ကိုယ်စားလှယ် Gus Yatron ထံသို့ စာရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဂျော့ HW ဘုရှ်
အီရတ်သားများဟာ "ဆေးရုံတွေထဲဝင်သွားကြပြီး ဖန်ပေါင်းချောင်ထဲက ကလေးတွေကို အပြင်ထုတ်၊ လူနာတွေဆီက အသက်ကယ်စက်တွေဖြုတ်ယူပြီး အီရတ်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ကြတယ်" ဟု ပြည်ပြေးကူဝိတ်စော်ဘွားကြီး Sheik Jabbar al Ahmed al Sabah က စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့၌ သမ္မတ ဂျော့ဂျ်အိတ်ချ်ဒဘယ်လ်ယူဘုရှ်ထံ ပြောကြားလိုက်သည်။ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး ဘုရှ်က အမှာစကားပြောရာတွင် "အီရတ်ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကြောင့် တချိန်က ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဟာ မွှေနှောက်ဖျက်ဆီး လုယက်ခံလိုက်ရပြီး နိင်ငံသားတွေဟာလည်း တိုက်ခိုက်ခံ၊ အကျဉ်းကျခံ၊ ခြိမ်းခြောက်ခံကြရတဲ့အပြင် အသတ်လည်းခံခဲ့ကြရပါတယ်။" "အာရပ်လိဂ် နဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုကို မြေပုံပေါ်က ပျောက်ကွယ်သွားအောင် အီရတ်ခေါင်းဆောင်များက ကြိုးစားနေကြတယ်" ဟု ပြောခဲ့သည်။
ဖန်ပေါင်းချောင်လုယက်မှုကြောင့် လသားကလေးငယ် ၁၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကူဝိတ်စီမံကိန်းဝန်ကြီး ဆူလိုင်မန် မူတာဝါက စက်တင်ဘာ ၂၈ တွင် သတင်းပေးခဲ့သည်။
မျက်မြင်သက်သေများ၏ ပြောကြားချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ "ကူဝိတ်ဆေးရုံများရှိ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအပေါ် ကျူးလွန်သည့် အီရတ်တို့၏ ထိတ်လန့်အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ" အား ဖော်ထုတ်ထားသော အမေရိကန်အစိုးရ၏လျှို့ဝှက်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကို ရရှိခဲ့သည်ဟု ယူအက်စ် သတင်းနှင့် ကမ္ဘာတလွှားအစီရင်ခံမှု က စက်တင်ဘာ ၃၀ တွင် သတင်းတင်ဆက်သည်။ အီရတ်ကျူးကျော်မှု ၆ ရက်မြောက်နေ့တွင် အီရတ်စစ်သားများက "ဖာဟဟီးလ်ရှိ အာဒန်ဆေးရုံသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ဆေးရုံပစ္စည်းများ ခိုးယူရန် ရှာဖွေခဲ့သည်" ဟုလည်းကောင်း "လမစေ့ကလေး ၂၂ ဦး ထည့်ထားသည့် ဖန်ပေါင်းချောင်အား အောက်ဆီဂျင် ပလပ်ဖြုတ်ပစ်ပြီး ဖန်ပေါင်းချောင်များအား အလစ်သုတ်သွား” သောကြောင့် ကလေး ၂၂ ဦး သေဆုံးခဲ့သည် ဟုလည်းကောင်း ဖော်ပြသည်။
အောက်တိုဘာ ၉ ရက် သမ္မတသတင်းကွန်ဖရင့်၌ ဘုရှ်က -
စော်ဘွားကြီးပြန်သွားပြီးတဲ့နောက် [နိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုရေးရာအတွက် သမ္မတ၏လက်ထောက်] ဗိုလ်ချုပ် Scowcroft က လိပ်ပတ်လည်အောင်ရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖြိုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်သာမက နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က အတည်ပြုရေးသားထားပြီးဖြစ်တဲ့ စော်ဘွားကြီးဇတ်စုံခင်းပြခဲ့သည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြောင့်ပါ အလွန်စိုးရိမ်မိပါတယ်။ သူပြန်ပြောပြတဲ့ အချို့အရာတွေဟာ မယုံကြည်နိုင်လောက်ပါပဲ။ လူနာတွေဆီက ကျောက်ကပ်ဆေးစက် ဖြုတ်ယူပြီး ဘဂ္ဂဒက်ကို ပြန်ပို့တာ၊ ဖန်ပေါင်းချောင်ထဲက ကလေးတွေကို ဆွဲလွှတ်ပစ်ပြီး ဖန်ပေါင်းချောင်များကို ဘဂ္ဂဒက်သို့ ပြန်ပို့တာတွေကို ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ။ ခုလောလောဆယ်မှာ ဒီဇတ်လမ်း ဘယ်လောက်များများက စစ်မှန်မှုရှိလဲဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီနောက်မှာတော့ နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရောက်လာပြီး နယ်စပ်က လူတွေအကြောင်းကို ပြန်လည်အစီရင်ခံပါတယ်။ ရွံရှာစက်ဆုပ်စရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ စော်ဘွားကြီးဒီမှာ ရှိနေစဉ်က သူ့ရင်တွင်းစကားတွေ ထုတ်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။
ကူဝိတ်သံရုံးက ထူထောင်ထားသော လူထုဆက်ဆံရေးကော်မတီတခုဖြစ်ပြီး The Times News က "သက်ဆိုင်ရာ ကူဝိတ်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဝါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် ကော်မတီ" ဟု ဖော်ပြသည်။ ကော်မတီက သံရုံးအဆောက်အဦ မြေနေရာအား ယူထားသော်လည်း သံရုံးနှင့်လွတ်လွတ်ကင်းကင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
ဟေးလ် အဲန် နိုးလ်တန်[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၉၀ ၌ နယူးယောက်ရှိ ကူဝိတ်နိုင်ငံမှ စွန့်ခွာသူတစ်ဦးက ချဉ်းကပ်ခဲ့ပြီးနောက် "လွတ်လပ်သောကူဝိတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားများ" အား တာဝန်ယူခဲ့သည်။ နိုင်ငံ့ကမ်ပိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အီရတ်အာဏာရှင် ဆက်ဒမ်ဟူစိန်၏ ကူဝိတ်အပေါ် အန္တရာယ်ပြုမှုအား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ဂရုပြုသတိထားမိစေရန်ဖြစ်သည်။
ပြင်းထန်သောအရေးယူမှုအား ထောက်ခံမှုရယူရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် Hill & Knowlton က ဒေါ်လာ ၁ သန်း တန် လေ့လာမှု တစ်ရပ် ပြုခဲ့သည်။ လူထုအမြင်အား လွှမ်းမိုးနိုင်မည့် အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာအတွက် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် H & K က Wirthington Group အား ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးမှု (focus group discussion) တစ်ခု ပြုစေခဲ့သည်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု အတိအကျဆိုရလျှင် ဖန်ပေါင်းချောင်ဇာတ်လမ်းအပေါ် အသားပေးမှုက အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း လေ့လာမှုမှ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Hill & Knowlton သည် လူထုဆက်ဆံရေးကမ်ပိန်းအတွက် ကူဝိတ်များထံမှ ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းအထိ ရရှိခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
ကွန်ဂရက်ရှင်နယ် လူ့အခွင့်အရေး ဖောင်ဒေးရှင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
လူ့အခွင့်အရေး အမြတ်ထုတ်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးသော အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရက်တစ် အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ် တွမ်လန်တို့စ် နှင့် ရီပတ်ဘလီကန် ကိုယ်စားလှယ် ဂျွန်ပေါ်တာတို့က ဦးဆောင်ပြီး Hill & Knowlton ၏ ဝါရှင်တန် ရုံးချုပ်တွင် လျော့ဈေး ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ဖြင့် နေရာငှားရမ်းခဲ့သည်။
နေးရာမှာ ၁၉၉၀ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်၌ သီးသန့်စည်းဝေးပွဲ ရှေ့မှောက်တွင် နောက်ဆုံးသက်သေခံသူဖြစ်သည်။ အချိန် ၄ မိနစ်ကြာမြင့်သည့် သူမ၏ နှုတ်ဖြင့်သက်သေခံချက်တွင် -
ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ - ကျမအမည်ကတော့ နေးရာဖြစ်ပြီး ကူဝိတ်က ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဩဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ ငြိမ်းချမ်းလှတဲ့ နွေရာသီအားလပ်ရက်မှာ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မရဲ့အမေတို့ ကူဝိတ်မှာရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်နေ့မှာ ကျွန်မအစ်မဖြစ်သူ ကလေးမီးဖွားခဲ့တာကြောင့် သူမနဲ့အတူ အချိန်ကုန်ဆုံးဖို့ ကူဝိတ်ကို ရောက်ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ နွေရာသီအားလပ်ရက်မျိုး ကျွန်မရဲ့ ၁၀ တန်း အတန်းဖော်တွေ မကြုံကြပါစေနဲ့လို့ ကျမ ဆုတောင်းပါတယ်။ တခါတရံ ကျွန်မအရွယ်အမြန်ရောက်ပြီး လူကြီးတယောက်ဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းဖူးပါတယ်။ ကျွန်မမြင်လိုက်ရတဲ့ ကူဝိတ်က ကလေးတွေ နဲ့ ကျွန်မရဲ့ နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကြောင့် ကျွန်မရဲ့ဘဝ လုံးဝပြောင်းလဲသွားရပါတယ်၊ ကူဝိတ်သားတွေ၊ လူငယ်လူကြီးနဲ့ ကလေးသာသာအရွယ်လေးရဲ့ ဘဝတွေလည်း ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မအမနဲ့ ၅ ရက်သား ကျွန်မတူလေးတို့ဟာ သဲကန္တာရကို ဖြတ်ပြီး ဘေးလွတ်ရာကို ခရီးနှင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကူဝိတ်မှာ ကလေးတွေအတွက် နို့မရတော့ပါဘူး။ သဲကန္တာရထဲမှာ သူတို့စီးလာတဲ့ကား နစ်သွားပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျက အကူအညီရောက်လာတဲ့အခါကျမှသာ လက်မတင်လေးလွတ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်မနိုင်ငံအတွက် တစ်ခုခု လုပ်ပေးချင်တဲ့အတွက် ကျွန်မ နောက်ချန်နေရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျူးကျော်ပြီးတဲ့နောက် ဒုတိယပတ်မှာ ကူညီချင်ကြတဲ့ အခြား အမျိုးသမီး ၁၂ ယောက်နဲ့အတူ AlIdar (အသံဖလှယ်) ဆေးရုံမှာ ကျွန်မ လုပ်အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မက အသက်အငယ်ဆုံးလုပ်အားပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ တခြားအမျိုးသမီးတွေက အသက် ၂၀ ကနေ ၃၀ အထိဖြစ်ကြပါတယ်။
ကျွန်မ အဲဒီမှာ ရှိနေတုန်း အီရတ်စစ်သားတွေ သေနတ်ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆေးရုံထဲ ဝင်လာတာ ကျွန်မတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကလေးတွေကို အထဲက ထုတ် ဖန်ပေါင်းချောင်တွေကို ယူသွားကြပြီး အေးစက်နေတဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကလေးတွေကို ပစ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ အရမ်းထိတ်လန့်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ လမစေ့ဘဲ မွေးလာတဲ့ ကျွန်မတူလေးလည်း အဲဒီနေ့မှာ သေသွားခဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာကို မတွေးမိဘဲမနေနိုင်အောင်ပါဘဲ။ ဆေးရုံကပြန်လာပြီးတဲ့နောက် အီရတ်ကျူးကျော်မှုကို ပြစ်တင်တဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်တွေကို ကျွန်မသူငယ်ချင်းတချို့နဲ့အတူ လိုက်လံဝေငှခဲ့ပါတယ်။ အီရတ်တွေသာ မြင်သွားရင် အသတ်ခံရလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးခံရတဲ့အချိန်အထိပါပဲ။
ကူဝိတ်မှာရှိသမျှအရာအားလုံးကို အီရတ်တွေက ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ ဆူပါမားကတ်တွေကနေ အစားအစာတွေ၊ ဆေးဆိုင်တွေကနေ ဆေးဝါးတွေ၊ စက်ရုံတွေကနေ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကို လုယူသွားကြပြီး အိမ်တွေကို မွှေနှောက်ရှာဖွေကာ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း နှိပ်စက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အီရတ်တွေရဲ့ အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကို သူလွတ်လာပြီးတဲ့နောက် တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ သူက အသက် ၂၂ နှစ်ပဲ ရှိသေးပေမဲ့လို့ အဖိုးကြီးတယောက်ပုံပေါ်နေပါပြီ။ အီရတ်တွေက ရေကူးကန်ထဲ သူ့ခေါင်းကို နှစ်ထားခဲ့ကြလို့ ရေနစ်လုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့လက်သည်းခွံတွေကို ဆုတ်ပစ်ကြပြီး ခန္ဓာကိုယ်ဖုံးကွယ်အပ်တဲ့နေရာတွေကို လျှပ်စစ်နဲ့တို့ခဲ့ပါသေးတယ်။ သူကံကြီးလို့သာ အသက်ရှင်နေခဲ့တာပါ။
တကယ်လို့ အီရတ်စစ်သားတယောက် ရပ်ကွက်မှာ သေဆုံးနေတာကို တွေ့ရင် အနီးပတ်ဝန်းကျင်က အိမ်တွေအားလုံးကို ပြာကျတဲ့အထိ မီးတင်ရှို့ကြပါတယ်။ ကျောက်ခဲနှင့်ပြာတွေပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်ရောက်မှသာ မီးသတ်သမားတွေကို လာခွင့်ပေးပါတယ်။
အီရတ်တွေက သမ္မတဘုရှ်ကို လှောင်ပြောင်သရော်ကြပြီး၊ ကူဝိတ်ကနေထွက်လာတဲ့လမ်းမှာ ကျွန်မနဲ့ကျွန်မမိသားစုကို နှုတ်နဲ့သာမက ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားကြပါတယ်။ ကူဝိတ်မှာ ဘဝရှင်သန်ရတာ မခံစားနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်မတို့အစိုးရကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ အရာမှန်သမျှကို ဖုံးဝှက်၊ မီးရှို့ ဒါမှမဟုတ် ဖျက်ဆီးတာတွေ လုပ်ဖို့ အတင်းအကျပ်စေခိုင်းပါတယ်။
ကူဝိတ်က ကျွန်မတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်ပြီးတော့ စော်ဘွားကြီးကြီးကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ အီရတ်တွေ ကျွန်မတို့ကို ပစ်ခတ်လာတဲ့အချိန်ထိ ကူဝိတ်မှာရှိတဲ့ ကျမတို့အိမ်ခေါင်မိုးတွေပေါ်မှာ ဒီအတိုင်းရေးခဲ့ကြပြီး ကျွန်မတို့ ထပ်လုပ်ကြပါအုံးမယ်။ ဆက်ဒမ်ဟူစိန် မဖျက်ဆီးခင်က ကူဝိတ်ကို အမှတ်ရနိုင်လောက်အောင် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ပြီး ပြန်တည်ဆောက်နိုင်အောင် ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ အသက်အရွယ်ဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၅ နှစ် ဖြစ်တာ ကျွန်မဝမ်းသာရပါတယ်။
နှုတ်ဖြင့် သက်သေခံထွက်ဆိုချက်တွင် ကလေးမည်မျှ ဖန်ပေါင်းချောင်တွင်း ရှိနေခဲ့သည်ကို အတိအကျမသတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း Hill and Knowlton က ဖြန့်ဝေသည့် ပုံနှိပ်မူတွင် "ကျွန်မ အဲဒီမှာ ရှိနေတုန်း အီရတ်စစ်သားတွေ သေနတ်ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆေးရုံရောက်လာပြီး ကလေးငယ် ၁၅ ဦးကို ဖန်ပေါင်းချောင်ထဲမှာ ထားတဲ့ အခန်းထဲကို ဝင်သွားတာ ကျွန်မတွေ့လိုက်ရပါတယ်။" ဟု ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ သက်သေခံထွက်ဆိုချက်ကို ကျမ်းကျိန်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပေ။
သီးသန့်စည်းဝေးပွဲ ၏ တွဲဘက်ဥက္ကဋ္ဌ ကိုယ်စားလှယ် ဂျွန်ပေါ်တာက "ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု နှင့် လူသားမဆန်မှု ၊ ရက်စက်မှုပေါ်သာယာစိတ်" မျိုးကို သီးသန့်စည်းဝေးပွဲ တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော သူ၏ ၈ နှစ်တာသက်တမ်းတွင် မကြားဖူးခဲ့ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုသည်။ နေးရာ၏ ထွက်ဆိုချက်အား ဇာတ်လမ်းပမာအဆန်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခံရသည်။
ဟေးလ် အဲန် နိုလ်တန်[ပြင်ဆင်ရန်]
နေးရာ၏ သက်သေထွက်ဆိုချက်မည်မျှအား ဇာတ်တိုက်သင်ကြားထားသည်ကို မသိရပေ။ အကျိုးတော်ဆောင်အနေဖြင့် မူဟန်ပိုင်းကိုသာ အကူအညီပေးရန် ဖြစ်သော်လည်း "မျက်မြင်သက်သေများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း ၊ သက်သေထွက်ဆိုချက် ရေးပေးခြင်း နှင့် ထိရောက်စေရန် သက်သေခံများအား နည်းပြသင်ကြားပေးခြင်း" တို့ကို H&K က ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သတင်းရသည်။
နေးရာ၏ သက်သေထွက်ဆိုချက်မှာ အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြခံရသည်။ ကြားနာမှုကို ရိုက်ကူးခဲ့သော Hill & Knowlton က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ရုပ်မြင်သံကြားဌာန ၇၀၀ ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော သို့ ဗီဒီယိုသတင်းထုတ်ပြန်ချက် ပေးပို့ခဲ့သည်။
ထိုည၌ ထွက်ဆိုချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အေဘီစီ၏ ညပိုင်း နှင့် အဲန်ဘီစီ ညပိုင်းသတင်းတွင် ထုတ်လွှင့်ရာမှ ၃၅ နှင့် ၅၃ သန်းအကြားရှိသော အမေရိကန်နိုင်ငံသား ကြည့်ရှုသူပရိတ်သတ်များထံ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ၇ ဦးက ၎င်းတို့၏ စစ်အင်အားအသုံးပြုမှုအားထောက်ခံသော မိန့်ခွန်းတွင် နေးရာ၏ ထွက်ဆိုချက်ကို ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မတဂျော့ချ်ဘုရှ် နောက်သီတင်းပတ်များတွင် ၁၀ ကြိမ်ထက်မနည်း ထပ်တလဲလဲပြောခဲ့ပြန်သည်။ အမေရိကန်တို့၏ ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်မှုအပေါ် လိုလားသည့် သဘောထားအမြင်အား ခလောက်ဆန်ရာတွင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအကြောင်း သူမ၏ဖွင့်ဟချက်မှာ အကူအညီရခဲ့သည်။
သေဆုံးမှု ၉၂ မှုအတွက် ဒေါက်တာ Ali Al-Huwail က ကျိန်တွယ်ပြောနိုင်သည်ဟု ၁၉၉၁ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ၌ ဆန်းဒေးတိုင်းမ်စ်က သတင်းတင်ဆက်သည်။
စွပ်စွဲချက်များအား အီရတ်က ငြင်းဆိုသည်။ အီရတ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး Latif Nassif al-Jassem က အောက်တိုဘာ ၁၆ တွင် အီရတ်သတင်းအေဂျင်စီထံ ဖြေကြားရာ၌ "ခု ခင်ဗျားက [ဘုရှ်ကိုဆိုလို] ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မူဝါဒကြောင့် လိုငွေပြနေတဲ့ဘတ်ဂျက်ကို ကွန်ဂရက်က အတည်ပြုစေဖို့ သူ [Sheikh Jaberကိုဆိုလို] ပြောသမျှကို အသုံးချနေတာပဲ" ဟုပြောဆိုခဲ့သည့်အပြင် "ခင်ဗျားလို အင်အားကြီးနိုင်ငံတခုရဲ့ သမ္မတအနေနဲ့ စကားလုံးတွေကို ဂရုတစိုက် ချိန်ဆပြောရမှာဖြစ်ပြီး ပြောသမျှ သံယောင်လိုက်တတ်တဲ့ လူပြက်တစ်ဦးလို လုပ်မနေသင့်ဘူး" ဟု ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ဂျာနယ်လစ်များက ၁၉၉၀ အောက်တိုဘာ ၂၁ တွင် အီရတ် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အရာရှိများ လိုက်ပါပို့ဆောင်မှုဖြင့် ကူဝိတ်သို့သွားရောက်ခဲ့ရာ ကူဝိတ်အမျိုးသမီးဆေးရုံမှ ဆရာဝန်များက ဖန်ပေါင်းချောင်စွပ်စွဲချက်များအား ငြင်းပယ်သည်။ ခရီးစဉ်အတွင်း ကူဝိတ်ကျန်းမာရေးဌာနဆိုင်ရာ အီရတ်အကြီးအကဲ Abdul-Rahman Mohammad al-Ugeily က "ကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ ကူဝိတ်ဆေးရုံနှင့် ကျန်းမာရေး စင်တာ ၁၄ ခုကို ကူညီလည်ပတ်ပေးနိုင်အောင် ဘဂ္ဂဒက်က ဆရာဝန် နှင့် အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း ဦးရေ ၁၀၀၀ ကို စေလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်" ဟု ပြောခဲ့သည်။
သတင်းအစီရင်ခံစာနှင့်ဆက်နွယ်သည့် သေးငယ်သော စစ်ဆေးမှုပင်လျှင် ဒီမိုကရက်တစ်ဖြစ်စဉ်အတွက် ကြီးစွာသော အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်စေပါတယ်။
— ဂျွန် မက်အာသာ
"ကူဝိတ်သူနာပြုများနှင့် ဆရာဝန်များ အလုပ်ရပ်နားခြင်း သို့မဟုတ် တိုင်းပြည်မှ ထွက်ပြေးသည့်အချိန်၌ မွေးကင်းစကလေးများအပါအဝင် လူနာများ အမှန်ပင်သေဆုံးခဲ့သည်"၊ အီရတ်တပ်ဖွဲ့များက "ဆေးရုံသုံးဖန်ပေါင်းချောင်များအား ခိုးယူပြီး ကူဝိတ်ကလေးများအား သေစေရန် ထားပစ်ခဲ့သည်ဆိုခြင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း" တွေ့ရသည်ဟု အေဘီစီသတင်းထောက် ဂျွန်မာတင်က ၁၉၉၁ မတ်လ ၁၅ ရက်၌ သတင်းပေးပို့သည်။
"ကူဝိတ်မျက်မြင်သက်သေ နေးရာကို အမှတ်ရကြသေးရဲ့လား" ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည့် ဂျွန်မက်အာသာ၏ သဘောထားအမြင် စာမျက်နှာ (Op-ed) ကို နယူးယော့ခ်တိုင်းမ်စ်က ၁၉၉၂ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်၌ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နေးရာမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ ကူဝိတ်သံအမတ်ကြီး Saud Nasir al-Sabah ၏ သမီးဖြစ်ကြောင်း မက်အာသာက တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ "စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရေးယူမှုအား ထောက်ခံရန်နှင့်ပတ်သက်သည့် အမေရိကန်တို့၏ စကားရည်လုပွဲကို ဖန်ပေါင်းချောင်ဇတ်လမ်းက တဖက်စောင်းနင်းဖြစ်စေခဲ့သည်" ဟု မက်အာသာက ကောက်ချက်ချပြီး "သူတို့ [ကိုယ်စားလှယ် လန်တို့စ်နှင့် ပေါ်တာ]၏ လုပ်ရပ်များက သိသာသည့်ကိုယ်ကျိုးစီးပွားယှက်နွယ်မှု ဖြစ်မဖြစ် နှင့် မျက်ရည်လယ်ရွဲနှင့် နေးရာမှာ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် မည်သူဖြစ်ကြောင်းကို ၁၉၉၀ အောက်တိုဘာလက ၎င်းတို့သိရှိခဲ့မှု ရှိမရှိကို ကွန်ဂရက်ရှင်နယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအနေဖြင့် ဖော်ထုတ်စေဖို့ရာ ၎င်းတို့ ၂ ဦး နှင့် Hill and Knowlton ကြားက အထူးဆက်ဆံရေးက တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့သလား" ဆိုသည်ကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ဤဇာတ်လမ်းက မက်အာသာ အား ဝါရှင်တန်လစဉ်၏ လစဉ်စာနယ်ဇင်းဆုကို ၁၉၉၂ ဧပြီ၌လည်းကောင်း ဆုကို ၁၉၉၃ ၌လည်းကောင်း ရစေခဲ့သည်။
Hill and Knowlton[ပြင်ဆင်ရန်]
အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို အပိုဆာဒါးမပါဘဲ ဖြန့်ဖြူးပါတယ်။
— Frank Mankiewicz ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ၊ Hill & Knowlton
နယူးယော့ခ်တိုင်းမ်စ် အယ်ဒီတာသို့ပေးစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သော မက်အာသာ၏ စိုးရိမ်မကင်းမှုကို Hill & Knowlton အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ထောမတ်စ်အီးအက်ဒီဆန်က ၁၉၉၂ ဇန်နဝါရီ ၁၅ တွင် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ "လှည့်ဖျားသည့်သက်သေခံချက်ဖြစ်ကြောင်း သိသိလျက်နှင့် ထုတ်ဝေရန် မည်သူနှင့်မျှ ပူးပေါင်းခဲ့ခြင်းမရှိ" ၊ "ကူဝိတ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် သက်သေခံချိန်တွင် သူမ၏ စစ်မှန်မှုကို မေးခွန်းထုတ်ရန် အကြောင်း" အကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းတွင် မရှိ ဟုလည်း အက်ဒီဆန်က ပြောခဲ့သည်။ မွေးကင်းစကလေးများအား အီရတ်စစ်သားများက ဖန်ပေါင်းချောင်တွင်းမှ ဖယ်ပစ်ကြသည်ဟူသော နေးရာ၏ စွပ်စွဲချက်ကို လခြမ်းနီအကြီးအကဲ ဒေါက်တာ Ibraheem Behbehani က ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရှေ့မှောက်တွင် ထပ်ဆင့် အတည်ပြုခဲ့ပြီး ကူဝိတ်သို့ မီဒီယာများအား ပြန်ဝင်ခွင့်မပြုခဲ့သဖြင့် "လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်တိုင်အောင် ဒုက္ခသည်များ၏ ဇာတ်လမ်းကို ချက်ချင်းစစ်ဆေးနိုင်ရန် နည်းလမ်းမရှိခဲ့" ကြောင်း ယင်းစာက ရှင်းလင်းချက်ထုတ်သည်။ "နေးရာ၏ယုံကြည်ရမှုအား အကယ်၍သူမကဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆရာမ တစ်ဦးသာဖြစ်ခဲ့လျှင် မေးမြန်းသည်ထက်ပို၍ မေးခွန်းမထုတ်သင့်" ကြောင်း ၊ ကုမ္ပဏီ၏ ကူဝိတ်နှင့် လုပ်ကိုင်နေမှုမှာ အကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်း၏ စံနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း၊ "အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက် မျှမျှတတဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်" ဟု အက်ဒီဆင်က နိဂုံးချုပ်ပြောသည်။
လုပ်ငန်းပုံရိပ်အား သန့်စင်ရန် ၁၉၉၂ ဩဂုတ်တွင် ဟောင်းဝပ်ပတ်စတာက ရောဘတ် ကေ ဂရေးအား ဝါရှင်တန်ရုံးအထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ် အစားထိုးခဲ့သည်။
Hill & Knowlton က အတုအယောင်လှုပ်ရှားမှု "လွတ်လပ်သောကူဝိတ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားများ" အား အယုံသွင်းဖန်တီးခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ကုလသမဂ္ဂရှိ လူထုအမြင်နှင့် မူဝါဒအပေါ် ဩဇာသက်ရောက်နိုင်ရန် သံသယဖြစ်ဖွယ် သက်သေခံအထောက်အထားများ နှင့် မျက်မြင်သက်သေများအား အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ဝေဖန်သူများက အခိုင်အမာပြောဆိုသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြွေးမြီနှင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးဘဏ် ၊ ဆိုင်ယန့်စ်တော်လော်ဂျီ ချာ့ချ် ၊ ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုဆန့်ကျင်ရေးကမ်ပိန်းအပါအဝင် အခြားဖောက်သည်များနှင့်တကွ Hill & Knowlton ၏ "လွတ်လပ်သောကူဝိတ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားများ" ကိုယ်စား လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် လူထုဆက်ဆံရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအကြား ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်များ တိုးမြင့်စေခဲ့သည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှာ အသစ်အဆန်းမဟုတ်သော်လည်း ဤကိစ္စများ၏ ထင်ရှားမှုကြောင့် ယခင်ကထက် ပို လှုပ်ခတ်သည်။
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဦးထုပ်တွေကို မြဲမြဲဆုပ်ထားပါ။ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲ သမိုင်းကို ပြန်ပြင်ရေးမဲ့ မဟာကမ်ပိန်းကြီး စတင်နေပါပြီ။
— မက်အာသာ ထံ တွမ်လန့်တို့စ်၏ တုံ့ပြန်မှု
ထိုစဉ်က လန်တို့စ်မှာ ဘုရှ်၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီး ကွန်ဂရက်ရှင်နယ် လူ့အခွင့်အရေး ဖောင်ဒေးရှင်း၏ တွဲဘက်ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း နေးရာကေ့စ်နှင့်ပတ်သက်သည့် သူ၏ ရပ်တည်မှုအနေအထားကိုသော်လည်းကောင်း သူမ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အစစ်အမှန်ကိုသော်လည်းကောင်း ဘုရှ်အား အသိပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများအား ကာကွယ်ရန် သူမဖခင်၏ တောင်းဆိုချက်အရ နေးရာ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ဖုံးကွယ်ထားခဲ့သည်ဟု အင်တာဗျူးတခုတွင် လန်တို့စ်က ပြောသည်။ မမှန်မကန် လုပ်ဆောင်မှု စွပ်စွဲချက်မှန်သမျှကို လန်တို့စ်ကငြင်းပယ်ပြီး "မီဒီယာက သူမအပေါ်အာရုံကျသွားကြခဲ့လို့ပါ။ တကယ်လို့ သူမသာ သက်သေမခံခဲ့ရင် သူတို့က အခြားတပါးမှာ အာရုံစိုက်ခဲ့ကြမှာပါပဲ။" ဟု အငြင်းအခုံပြုခဲ့သည်။ လန်တို့စ်က ပြောသည်မှာ -
ကူဝိတ်သံရုံးကတဆင့် သီးသန့်စည်းဝေးပွဲ ဆီကို ခေါ်လာတဲ့ မျက်မြင်သက်သေ ဘယ်သူ့ကိုမှ ယုံကြည်ရဖွယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ အတွေး ကျွန်တော့်ဆီမှာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ သူမရဲ့ ဇာတ်လမ်းမမှန်ကန်ဘူးရယ်လို့ ယူဆရမဲ့အကြောင်းရင်းခံမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဓိကအချက်က ဒီထက်ပိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးရဲ့ ဇာတ်လမ်းက ကကြီးကနေအအထိ လုပ်ကြံဖန်တီးမှု ဖြစ်တယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က အနုမာနအဆိုထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု တပြုံတခေါင်းကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပျောက်ကွယ်သွားစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နယူးယော့ခ်တိုင်းမ်စ် သတင်းစာထံ ၁၉၉၂ ဇန်နဝါရီလတွင် ပေးပို့သော "ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအတွက် ရှေ့နောက်ညီညွတ်တဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ကူဝိတ်ကပေးခဲ့တယ်" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အယ်ဒီတာထံပေးစာတွင် တွမ်လန်တို့စ်က မက်အာသာ၏ စွပ်စွဲချက်များကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ "မစ္စတာမက်အာသာရဲ့ အယုံသွင်းဆောင်းပါးက ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲသမိုင်းကို ပြန်ပြင်ရေးချင်တဲ့ မယုံသင်္ကာရှိသူတွေအတွက်သာ အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။" ၊ "အီရတ်ကျူးကျော်ချိန်က ဒီမိန်းကလေး ကူဝိတ်မှာတောင် ရှိမနေခဲ့ဘူးဆိုတာရယ် ဒီအော့နှလုံးနာစရာကောင်းလှတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီး တစ်ခုလုံးဟာ အမေရိကန်လူထုဆက်ဆံရေးအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ သူခိုးဂျပိုးဆန်ဆန် ကြံစည်မှုမျှသာဖြစ်တယ်ရယ်လို့ ဆောင်းပါးရဲ့ မကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်တွေနဲ့ စောင်းပါးရိပ်ခြည်ရေးသားမှုက ဆိုလိုနေပါတယ်။" ဟု သူက ရေးသားခဲ့သည်။ နေးရာဟာ ကူဝိတ်သံအမတ်ကြီးရဲ့ သမီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်က သူမကို ပိုယုံကြည်ဖွယ်ရာရှိတဲ့ မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးဖြစ်စေပါတယ်" ၊ "သံအမတ်ကြီး ၊ အစိုးရနဲ့ သူမရဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုက သူမအပေါ် ယုံကြည်နိုင်မှု ပိုတိုးနိုင်ပါတယ်။" ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ "သူမပြောကြားချက်တွေက အခြားမျက်မြင်သက်သေတွေဆီက ရရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေရော မီဒီယာတွေက ကူဝိတ်ကနေ တကမ္ဘာလုံးအနှံ့ သယ်ဆောင်လာတဲ့ အခြားရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအဖြစ်တွေနဲ့လည်း ညီညွတ်နေတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြားနာမှုမှာ သက်သေခံထွက်ဆိုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ နေးရာနဲ့အလားတူ အဖြစ်တွေကို ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာရေးအဖွဲ့လို လွတ်လပ်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အစီရင်ခံစာတွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီနေတယ်" ဟုလည်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ "မရေတွက်နိုင်တဲ့ အတည်ပြုပြီး အီရတ်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိပြီးမှတော့" ဒီလိုမျိုး "ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကို ဖန်တီးဖို့ မလိုအပ်တဲ့အပြင် ခုတ်ရာတခြား ရှရာတလွဲသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်" ဟု ပြောကြားရင်း လန်တို့စ်က စာကို အဆုံးသတ်သည်။
သီးသန့်စည်းဝေးပွဲ နှင့် Hill & Knowlton အကြား အထူးဆက်ဆံရေး စွပ်စွဲချက်အားလုံးအား ငြင်းဆန်ပြီး "သီးသန့်စည်းဝေးပွဲ ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာ ဒီနိုင်ငံတွေကို ဘယ် ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း ဒါမှမဟုတ် လူထုဆက်ဆံရေးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းက ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာကို ထည့်တွက်ခြင်းမပြု" ဟု ထည့်သွင်းရေးသားထားသည်။
နောက်ဆက်တွဲ နျူးယော့ခ်တိုင်းမ်စ်ထံပေးစာတွင် သက်သေခံထွက်ဆိုချက်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်နှင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်း မက်အာသာက ထောက်ပြခဲ့သည်။
သူမပြောခဲ့သည်များကို သမီးဖြစ်သူက မျက်မြင်ကြုံခဲ့ရပြီး ကူဝိတ်တွင် သူမရှိနေခဲ့ကြောင်းကို ကူဝိတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံရုံးက အတည်ပြုနိုင်သည်ဟု သံအမတ်ကြီးက ပြောဆိုသည်။ "ကျွန်တော် ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့က လိမ်ချင်တယ် ဒါမှမဟုတ် ချဲ့ကားပြောချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်သမီးကို အသုံးချမှာမဟုတ်ပဘူး။ တခြားလူတွေကို ပိုက်ဆံပေးခိုင်းလို့ရပါတယ်" ဟုလည်း ပြောသည်။
Lauri Fitz- Pegado[ပြင်ဆင်ရန်]
Pegado သည် နေးရာထွက်ဆိုချက်ပေးသည့်အချိန်က Hill & Knowlton ၏ ခေတ္တ ဒုသမ္မတဖြစ်ခဲ့သည်။ လိမ်လည်သက်သေခံထွက်ဆိုချက်ကို နေးရာအား နည်းပေးလမ်းပြသင်ပေးခဲ့မှုအတွက် Pegado တွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု နောက်ပိုင်း၌ ကူဝိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုစဉ်အတွင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (Human Rights Watch) ၏ ဌာနခွဲ၊ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး (Middle East Watch) က ဖန်ပေါင်းချောင်ဇာတ်လမ်းအား ၎င်းတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ ရလဒ်များအား ၁၉၉၂ တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ "အီရတ်တွေက ဆေးရုံတွေကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ စစ်ပွဲအတွင်းဝါဒဖြန့်ခြင်းရဲ့ အခရာဖြစ်တဲ့ ဖန်ပေါင်းချောင်များအား ခိုးယူပြီး ကလေးများအား အညှာတာမရှိ ဖယ်ရှားကာ သေသွားစေရန် ကြမ်းပြင်ပေါ်ပစ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်မှာ အမှန်ဟူသမျှမပါရှိပေ။ ဒါမျိုးမလုပ်သင့်ကြောင်းကို အများတကာထက်ပိုအသိတရားရှိသင့်တဲ့ ပြည်ပကလူတွေ ဖန်တီးထားတဲ့ အမှန်တရားမြူမှုန်လောက်မျှသာပါဝင်သော ဇာတ်လမ်းများဖြစ်သည်။" အဖွဲ့ဒါရိုက်တာ အန်ဒရူး ဝစ်တလေက စာနယ်ဇင်းများထံ ပြောခဲ့သည်။ အီရတ်စစ်သားများက ဖန်ပေါင်းချောင်အတွင်းမှ မွေးကင်းစကလေး ၁၅ ဦးကို ဆွဲထုတ်ပြီး သေစေရန်ပစ်ထားခဲ့သည်ကို မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည်ဟု နေးရာက အခိုင်အမာပြောခဲ့သော ဆေးရုံတွင် ဆရာဝန်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် အဇဇ် အဘူ-ဟာမက်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ "မီးဖွားဆောင်မှာ ဖန်ပေါင်းချောင် ၂၅ ကနေ အခု ၃၀ အထိရှိခဲ့ပြီး အီရတ်စစ်သားတွေက တစ်ခုမျှ ယူမသွားဘဲ ဘယ်ကလေးကိုမှလည်း ထုတ်မပစ်ခဲ့ပါဟု ဆရာဝန်များက သူ့အားပြောခဲ့သည်" ဟု အင်ဒီပန်းဒန့် သတင်းစာက သတင်းဖော်ပြသည်။
နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ အစပထမပိုင်းတွင် ဤဇာတ်လမ်းကို ထောက်ခံခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ "အီရတ်တပ်ဖွဲ့များက လသားကလေးများအား ဖန်ပေါင်းချောင်တွင်းမှ ဖယ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့ ပြုရန် အမိန့်ပေးခြင်းဖြင့် ကလေးများသေစေခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်မည့် အားထားလောက်ဖွယ်ရာ သက်သေအထောက်အထားမတွေ့ရှိ" ဟု ဖော်ပြသည်။
ကူဝိတ်တာဝန်ရှိသူများက ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး စာနယ်ဇင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ ဤစွဲချက်များအား တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် ဖန်ပေါင်းချောင်ဇာတ်လမ်းအား အမှီအခိုကင်းသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တခု ပြုရန် Kroll Associates ကို ကူဝိတ်အစိုးရက ငှားရမ်းခဲ့သည်။ Kroll စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာ သီတင်း ၉ ပတ် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး အင်တာဗျူး ၂၅၀ ကျော် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နေးရာနှင့် အင်တာဗျူးတွင် သူမ၏ မူရင်းသက်သေထွက်ဆိုချက်မှာ - သက်သက်ညှာညှာဆိုရလျှင် - အရမ်းကာရော ပုံဖျက်ခံထားရသည့် အဖြစ်မှန်ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်တွင် ကလေးတစ်ဦးတည်းကိုသာ ဖန်ပေါင်းချောင်ပြင်ပ၌ "မိနစ်အနည်းငယ်ထက်မပိုဘဲ" တွေ့ခဲ့သည်ဟု Kroll ထံ သူမက ဖွင့်ပြောခဲ့သည်။ "မိနစ်အနည်းငယ်လောက်သာ ဝင်ရုံဝင်ခဲ့ပြီး" ထိုဆေးရုံတွင် မည်သည့်အခါကမျှ လုပ်အားမပေးခဲ့ဟုလည်း သူမက ပြောခဲ့သည်။
ဝေဖန်သူများက ကမ်ပိန်းကို အကျင့်ပျက်မှု ၊ လှည့်ဖျားမှု နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ယွင်းမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီး ၎င်းကို အီရတ်၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအဖြစ် အလိမ်အညာများ ဖြန့်ရန်နှင့် ချဲ့ကားရန် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွဲချက်တင်ခဲ့ကြသည်။
လန်တို့စ်မှာ သတင်းထိန်ချန်မှုဖြင့် အဝေဖန်ခံရသည်။
အမှန်အားဖြင့် ပလပ်ဆွဲအဖြုတ်ခံရသည့် ကလေးများပုံပြင် မဟုတ်တမ်းတရား သတင်း ဖြန့်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ မှသည် ကူဝိတ်ဆရာဝန်များတိုင်အောင် လူတိုင်းနီးပါး အဝေးပြေးကုန်ကြလေပြီ။
စစ်ပွဲပြီးဆုံးပြီးနောက် ရိုက်တာက သတင်းပို့ရာတွင် "လသားကလေးဖန်ပေါင်းချောင် ၂ ခု အပါအဝင် ကူဝိတ်မှ ခိုးယူသွားသော ထရပ်ကား ၉၈ လုံးစာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ" ကို အီရတ်က ပြန်ပေးခဲ့သည်ဟု ပါရှိသည်။ ဖန်ပေါင်းချောင်များကို အီရတ်တို့ ပြန်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့ယူသွားခဲ့သည်ဆိုသည့် သက်သေအထောက်အထားကို မရည်ရွယ်ဘဲ ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကူဝိတ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပါလီမန်အတွင်းဝန်၏ လက်ထောက် အဗ္ဗဒူလ် ရာဟင်းမ် အာ-ဇေ့ဒ် က ဆိုသည်။ "ဖန်ပေါင်းချောင်တွေကို အီရတ်တွေ မတော်တဆပြန်ပေးတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်" ဟု ကူဝိတ် လူနာတင်ယာဉ်အရာရှိချုပ် အဗ္ဗဒူလ်ရီဒါအဘာ့စ် က ဆိုသည်။
နေးရာ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မှန် ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် သတင်းအချက်အလက် ထိန်ချန်ထားသည့်အတွက် လူထုမှာ ယမ်းပုံမီးကျဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆုံးမှာ သိသင့်တာကတော့ လူထု့အမြင်ကို H&K က လမ်းလွှဲပစ်လိုက်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိမဟုတ်ဘဲ အမေရိကန်အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ၊ ပြည်ပအကျိုးစီးပွား ၊ ပုဂ္ဂလိကလူထုဆက်ဆံရေးနဲ့ ဆွယ်တရားဟောကမ်ပိန်းများက စစ်မှန်ပြီး ကျိုးကြောင်းပြည့်ဝ ၊ စိတ်ခံစားချက်ကို ဦးစားမပေးတဲ့ စကားစစ်ထိုးပွဲကို ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့သလား ဆိုတာပါပဲ။
အကြောင်းအရာ၊ တင်ဆက်မှု၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ထိရောက်မှု နှင့် နေးရာထွက်ဆိုချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် လူထုဆက်ဆံရေး လေ့လာမှုများစွာ၏ ဆွေးနွေးစရာခေါင်းစဉ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
"ရုပ်ပုံသတင်းစကားများနှင့် တွဲဘက်ထားသော နှုတ်ဖြင့်အခြေအတင်ပြောဆိုမှုများ အင်တိုက်အားတိုက် ဖြစ်လွန်းသွားသည့်အခါ ကျိုးကြောင်းညီညွတ်တဲ့ အခြေအတင်ဆွေးနွေးမှုတွေ ဖြစ်မလာနိုင်တော့သလောက်ပင်" ဟု Frans H. van Eemeren က သူ၏စာအုပ် Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse တွင် ရေးသားပြီး နေးရာ၏ဇတ်လမ်းကို argumentum ad misericordiam ဟု သရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။ ဆူဇန်း အေ ရော့ရှ်ဝေါ့လ်ဘ်၏ The Hill & Knowlton Cases: A Brief on the Controversy စာတမ်းတွင် စာရေးသူက H&K သည် ဗြိတိန်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အလျောက် "ဗြိတိသျှတို့၏ စိုးရိမ်မှု - အကယ်၍ကူဝိတ်နိုင်ငံငွေကြေးဒိုင်နာတန်ဖိုးမဲ့ခဲ့မည်ဆိုပါက ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ လဲပြိုနိုင်ဖွယ်ရှိမှုကဲ့သို့ - က Hill & Knowlton ၏ ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်သက်ရောက်ခဲ့သလဲ" ဟု မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ဝါရှင်တန်လစဉ်တွင်ပါရှိခဲ့သော "ကူဝိတ်ဂိတ် - ကူဝိတ်ကလေးငယ်များအား အီရတ်စစ်သားများ သတ်ဖြတ်မှု ချဲ့ကားခဲ့လေသလား" သတင်းဆောင်းပါးတွင် Ted Rowse က "မူရင်းနေးရာ၏ဇတ်လမ်းအား စစ်ဆေးမှုမရှိဘဲ ပြန့်နှံ့စေခဲ့ရာတွင် Hill & Knowlton ၏ လက်ချက်မိသွားသော သတင်းထောက်အများစုမှာ ထိုဇာတ်လမ်းကို မှိန်ဖျော့ပြက်ပျယ်သွားပြီး အလိုအလျောက်ပျောက်ကွယ်သွားစေလိုကြရာ ကုမ္ပဏီ၏ လူထုဆက်ဆံရေး မာယာပရိယာယ် အတွက်ပင်ဖြစ်စေတော့သည်။" ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ Second Front: Censorship and Propaganda in the Gulf War ကို ရေးသားခဲ့သူ ဂျွန်မက်အာသာက "ထိုကာလ၌ ပြည်ပအစိုးရတစ်ရပ်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်တို့အနက် ပညာသားအပါဆုံး နှင့် ဈေးအကြီးဆုံး လူထုဆက်ဆံရေးကမ်ပိန်း" ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
↑ Regan, Tom (2002-09-06). "When contemplating war, beware of babies in incubators". Christian Science Monitor. Retrieved on October 31, 2013.
↑ Morris, Al (2009). Civilisation Hijacked: Rescuing Jesus from Christianity and the human spirit From Bondage. ISBN 978-1440182426။
↑ "Alexander Cockburn reviews 'An American Life' by Ronald Reagan · LRB7February 1991"၊ lrb.co.uk၊ 1991-02-07၊ pp. 9။ September 23, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Fowler, p. 22
↑ ၅.၀ ၅.၁ "How George Bush, Sr. Sold the 1991 Bombing of Iraq to America" (December 28, 2002). CounterPunch.
↑ "Amnesty Responds to President Bush"၊ The Heights၊ 28 January 1991။ 26 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "U.S. Evacuates 171 From Iraq, Kuwait - Women Who Made It Out Recount Tales Of Terror"၊ St. Louis Post-Dispatch၊ September 8, 1990၊ စာ- 1A။ "Cindy of San Francisco, who declined to be identified further, said, Iraqis are beating people, bombing and shooting. They are taking all hospital equipment, babies out of incubators. Life-support systems are turned off. ... They are even removing traffic lights. "The Iraqis are beating Kuwaitis, torturing them, knifing them, beating them, cutting their ears off if they are caught resisting or are with the Kuwaiti army or police," she said."
↑ ၈.၀ ၈.၁ ကုလသမဂ္ဂ Security Council masthead document Letter Dated2September 1990 From The Permanent Representative Of Kuwait To The United Nations Addressed To The Secretary-General S/21694 September 3, 1990.
↑ Leff၊ Lisa။ "Weary, wary evacuees bring tales of horror"၊ The Washington Post၊ September 11, 1990။ "The evacuees told of soldiers looting office buildings, schools and hospitals for air conditioners, computers, blackboards, desks, and even infant incubators and radiation equipment. They described food shortages that afflicted soldiers as well as civilians, and random acts of violence."
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ "A battle ground to test Saddam - Iraq invasion of Kuwait"၊ September 5, 1990။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ Rendall, p. 24
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ ၁၂.၂ ၁၂.၃ ၁၂.၄ "Iraq, Kuwait Waging an Old-Fashioned War of Propaganda"၊ The Washington Post၊ September 10, 1990။ March 15, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ ကုလသမဂ္ဂ Security Council masthead document Letter Dated5September 1990 From The Permanent Representative Of Kuwait To The United Nations Addressed To The Secretary-General S/21713 September 5, 1990.
↑ Walton, p 771
↑ "Kuwait says seizure of hospital equipment caused many deaths"၊ September 6, 1992။
↑ "Iraq equipment removal killed patients - Kuwait."၊ September 6, 1992။
↑ "Kuwaiti says Iraq plundered hospitals"၊ Charlotte Observer၊ September 7, 1990၊ စာ- A16။
↑ "Official: Hospitalized in Kuwait are left to die"၊ Chicago Tribune၊ September 7, 1990၊ စာ- 12။
↑ "Persian Gulf crisis - More about the Mideast"၊ Houston Chronicle၊ September 7, 1990၊ စာ- A18။
↑ "Kuwait Says Iraq Plundered Hospitals"၊ The San Francisco Chronicle၊ September 7, 1990၊ စာ- A21။
↑ "Released Hostages Tell of Kuwait Terror"၊ All Things Considered၊ NPR၊ September 7, 1990။ "Total destruction everywhere, cars wrecked, burned, people thrown out of cars on the street you're driving down; they just throw people over the street. They're hitting children with the butts of the guns, taking infants out of incubators and taking the incubators."
↑ "Kuwait offers to help cover mideast costs - contributions should offset U.S. liability"၊ Newport News၊ September 8, 1990။ "Cindy, who refused to give her last name, and another woman who identified herself only as Rudi, told the Reuters news agency that Iraqi troops took premature babies out of incubators in Kuwait in order to steal the equipment."
↑ Tamayo၊ Juan O.။ "Iraqi hostage horror: `It smelled of death'"၊ Austin American-Statesman၊ September 8, 1990၊ စာ- A1။
↑ "Weekend Edition Sunday (News)"၊ NPR၊ September 9, 1990။ "`Time is running out,' said one,apediatrician. She said in the last few days, the Iraqi troops had lootedalocal hospital. Inaward for premature infants, soldiers had turned off the oxygen on incubators, she said, and packed the equipment for shipment to Iraq. Dr. Fawzi al-Said said the report came to her by the hospital attendants, who had buried the dead infants."
↑ "Iraq tightens its grip on Kuwait"၊ September 29, 1990၊ pp. 6A။ "The U.S. ambassador-designate to Kuwait, Edward Gnehm Jr., told reporters Monday that Kuwaiti health officials told him 22 babies born prematurely died when Iraqi troops removed them from incubators they stole. Gnehm has been named to replace current ambassador Nathaniel Howell, who is holed up inside the U.S. Embassy in Kuwait."
↑ Murphy၊ Kim။ "Kuwaitis bolt for border amid reports of atrocities"၊ Los Angeles Times၊ September 17, 1990၊ စာ- 1A။ "Western officials said that they are still investigating reports of atrocities in Kuwait and added that many appeared to be well-documented and supported by enough eyewitness accounts that they could be considered true. In one case, refugees reported that incubators for premature babies were confiscated by Iraqi troops and the babies inside were piled on the floor and left to die."
↑ "Air Cutoff of Iraq Gains U.N. Support Kuwaiti Refugees Spill Across Border"၊ San Jose Mercury News၊ September 17, 1990၊ စာ- 1A။ "In one case, refugees reported that incubators for premature babies were confiscated by Iraqi troops and the babies inside were piled on the floor and left to die. "This is the kind of thing that some people call genocide, and if people wanted to construe it as such, it could be cause for some kind of military intervention," saidaWestern diplomat in close contact with the Kuwaitis."
↑ Hoagland၊ Jim။ "End Saddam's Reign of Terror"၊ The Washington Post၊ September 25, 1990၊ စာ- a23။ "But while dissidents have been making such arguments, Saddam's actions in Kuwait show that he is not interested in compromise or in leaving Kuwait -- on any terms. He has begun to depopulate Kuwait, as he once did with Kurdistan, and to send in Iraqis with phony new citizenship documents. Based on Saddam's bloodstained track record, it is almost certain that the young Kuwaiti men being grabbed at the border and elsewhere in Kuwait are being sent to Iraq to die. American refugees and others report that Kuwait City's hospitals are being stripped of incubators and any other supplies that can be sent to Baghdad, leaving babies and infirm patients to die.ld give sanctions and negotiationsachance so he can avoid the costs of attacking Iraq's occupation forces is not enough. That does not stay Saddam's ruthless hand."
↑ "Suffer the Children: Summit must heraldanew era in lives of our endangered young"၊ Newark, New Jersey။ "The president of Citizens foraFree Kuwait recently wrote Rep. Gus Yatron (D-Pa.), decrying the brutality of this madman."Nothing points to the ruthlessness of Saddam Hussein more poignantly than his unmerciful misuse of the very young. His manipulation of political opponents through the abuse of their children is, sadly,awell documented fact. We recently learned that the Iraqi leader has ordered that maternity hospital incubators (in Kuwait), used for treating premature babies, be turned off, allowing these infants to die of exposure," he wrote."
↑ "Iraq plunders Kuwait, US warns war closer- The Gulf crisis"၊ The Sun Herald၊ September 30, 1990၊ စာ- 8။ "The emir told Bush of Iraqis going into hospitals, taking babies out of incubators and people off life-support machines to send the equipment back to Iraq."
↑ "Iraqi provocation\_Emir's tales of Iraqi atrocities in Kuwait may spur U.S. military response"၊ Philadelphia Daily News။
↑ "Remarks Following Discussions With Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah of Kuwait"၊ September 28, 1990။ "Iraqi aggression has ransacked and pillagedaonce peaceful and secure country, its population assaulted, incarcerated, intimidated, and even murdered. Iraq's leaders are trying to wipe an internationally recognized sovereign state,amember of the Arab League and the United Nations, off the face of the map."
↑ "Its leaders in exile, Kuwait plans for the day of freedom"၊ September 28, 1990။ "He said that Iraqi troops were plundering his country, removing even the rides and merry-go-around fromachildren's amusement park. "They went intoahospital and took babies from incubators. Twelve babies died so they could send the incubators to Baghdad.""
↑ ၃၄.၀ ၃၄.၁ Gergen၊ David။ "The barbarities of Saddam Hussein - In Kuwait, 22 babies died when invaders stole their incubators"၊ US News & World Report၊ September 30, 1990၊ စာ- A16။ "Secret U.S. government cables, obtained by U.S. News & World Report, reveal shocking acts of brutality inflicted by the Iraqis against innocent citizens at Kuwaiti hospitals. The cables are based on eyewitness accounts from Kuwaiti doctors and others traumatized by what they have seen. Among their allegations: -- On the sixth day of their invasion, Iraqi soldiers reportedly entered the Adan Hospital in Fahaheel looking for hospital equipment to steal. They unplugged the oxygen to the incubators supporting 22 premature babies and made off with the incubators. All 22 children died."
↑ "The President's News Conference"၊ The American Presidency Project၊ October 9, 1990။
↑ ၃၆.၀ ၃၆.၁ "THE MEDIA BUSINESS; Gulf Crisis StartsaCostly Fight for Good Press"၊ The New York Times၊3September 1990၊ စာ- 31။
↑ "Kuwaitis loan jets to transport troops"၊ The Times News၊ August 28, 1990၊ စာ- 5။
↑ ၃၈.၀ ၃၈.၁ ၃၈.၂ Roschbwalb, p. 268
↑ Rowse၊ Aruther E.။ "Teary Testimony to Push America Toward War"၊ The San Francisco Chronicle၊ October 18, 1992၊ စာ- 9/Z1။
↑ ၄၀.၀ ၄၀.၁ Andersen, p. 170
↑ ၄၁.၀ ၄၁.၁ The Washington Post။ "Jury Says3Took Kuwaiti Money To Promote War"၊ Sun-Sentinel၊ July 8, 1992။ November 7, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Deception on Capitol Hill"၊ The New York Times၊ January 15, 1992၊ စာ- A20။
↑ ၄၃.၀ ၄၃.၁ CSPAN Video Recording
↑ ၄၄.၀ ၄၄.၁ ၄၄.၂ Rowse, "Kuwaitgate - killing of Kuwaiti babies by Iraqi soldiers exaggerated"
↑ ၄၅.၀ ၄၅.၁ "Witenesses describe atrocities by Iraqis"၊ The Commercial Appeal၊ October 11, 1990။
↑ Pratt, p. 288
↑ ၄၇.၀ ၄၇.၁ Sriramesh, p. 864
↑ Walton, p. 772
↑ ၄၉.၀ ၄၉.၁ Rowse, "How to build support for war"
↑ Walton, p.771
↑ ၅၁.၀ ၅၁.၁ ၅၁.၂ ၅၁.၃ ၅၁.၄ Krauss၊ Clifford။ "CONGRESSMAN SAYS GIRL WAS CREDIBLE"၊ The New York Times၊ January 12, 1992။
↑ "Paradise lost: The full story of Iraq's violation of Kuwait - Gulf Crisis"၊ Sunday Times၊ January 13, 1991။
↑ "Iraq rejects U.S. charges of atrocities"၊ October 16, 1990။
↑ ၅၄.၀ ၅၄.၁ "Doctors deny babies killed in Iraqi invasion"၊ October 21, 1990။
↑ ၅၅.၀ ၅၅.၁ ၅၅.၂ ၅၅.၃ "Remember Nayirah, Witness for Kuwait?"၊ The New York Times၊ January 6, 1992။
↑ MacArthur, John R.။ Harper's Magazine။ March 16, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅၈.၀ ၅၈.၁ Gilboa, p. 9
↑ ၅၉.၀ ၅၉.၁ ၅၉.၂ ၅၉.၃ "P.R. Firm Had No Reason to Question Kuwaiti's Testimony"၊ The New York Times၊ January 17, 1992။
↑ Roschwalb, p. 273
↑ "Troubled Public Relations Firm Names New Washington Manager; Paster Replaces Gray, Who Retains Title as Chairman of the Board"၊ The Washington Post၊ August 28, 1992၊ စာ- A24။
↑ Trento, p. 381
↑ Grunig, pp. 137-138
↑ Roschbwalb, p. 267
↑ ၆၅.၀ ၆၅.၁ ၆၅.၂ ၆၅.၃ ၆၅.၄ "Kuwaiti Gave Consistent Account of Atrocities"၊ The New York Times၊ January 27, 1992၊ စာ- A20။
↑ MacArthur၊ John။ "Kuwaiti Gave Consistent Account of Atrocities; Retracted Testimony"၊ The New York Times၊ January 27, 1992။
↑ Stauber, p. 143
↑ Leonard Doyle, "Iraqi Baby Atrocity is Revealed as Myth," The Independent (12 January 1992) p. 11.
↑ "INCUBATOR STORY NEEDED VERIFICATION"၊ Sun Sentinel၊ Jan 21, 1992။ (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ Koenig၊ Robert L.။ "Testimony Of Kuwaiti Envoy's Child Assailed"၊ St. Louis Post-Dispatch၊ January 9, 1992၊ စာ- 1C။
↑ Priest၊ Dana။ "Legislator to Probe Allegations of Iraqi Atrocities; Accuser Identified as Daughter of Kuwait Ambassador to U.S."၊ The Washington Post၊ January 7, 1992။ (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ Ted Rowse, "Kuwaitgate - killing of Kuwaiti babies by Iraqi soldiers exaggerated," Washington Monthly (September 1992).
↑ ၇၃.၀ ၇၃.၁ Weiss၊ Tara။ "NPR insists funding doesn't influence news"၊ The Hartford Courant၊ March 15, 2001။
↑ Hebert၊ James။ "Always consider the source ... if you can identify it"၊ Copley News Service၊ July 14, 2003။ ""It wasacorrupt, unethical thing to be doing," Broom says of the incident and Hill and Knowlton's role in it."
↑ "Deception on Capitol Hill"၊ The New York Times၊ January 15, 1992။
↑ Dwyer၊ Jim။ "Desert Mirage Of Dead Babies"၊ July 3, 1992။ (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ ၇၇.၀ ၇၇.၁ Brough၊ David။ "IRAQ RETURNS STOLEN INCUBATORS TO KUWAIT."၊ September 6, 1992။
↑ Richissin၊ Todd။ "Media finds war access denied ; Coverage: Journalists are bristling at the Pentagon's tightening control on what they're allowed to see"၊ October 17, 2001။ (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ Qtd. in Trento, p. 389
↑ Eemeren pp. 70-71
↑ Roschwalb, p. 272
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နေးရာ၏_သက်သေခံထွက်ဆိုချက်&oldid=494808" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၅:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။